Amaqabane ezokhenketho eMekong kunye noGunyaziwe wezoKhenketho eThailand
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Amaqabane ezokhenketho eMekong kunye noGunyaziwe wezoKhenketho eThailand
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseCambodia • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ngokudibana neTAT, ukhenketho lwaseMekong luphehlelele iphulo elitsha lokukhuthaza iMekong Moments ukukhanyisa ukhenketho lommandla kunye nomtsalane weThailand nakwingingqi ukukhuthaza ukhenketho kwi-GMS.
Ngemizamo yentsebenziswano evela kwi-Ofisi yoLungelelwaniso lwezoKhenketho eMekong (MTCO) kunye neGunya lezoKhenketho laseThailand (TAT), kongezwe iipaseji zohambo ezisithoba kwiqonga lewebhu lezentlalo iMekong Moments kumzamo wokunceda ukukhuthaza ubuncwane obufihliweyo eThailand ngaphakathi kweGreater Ulawulo lweMekong (GMS).
Iphuhliswe zii-UNWTO zeLungu eliDibeneyo leLungu leChameleon Strategies, iMekong Moments yenziwa sisakhelo sobambiswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala iDestination Mekong kwaye inikwe amandla yinkqubo yolawulo lwentengiso yorhwebo ENWOKE. Ngokusebenzisa imeko yokwabelana ngamajelo eendaba ezentlalo, i-MTCO iphumeze ngempumelelo eli phulo lokuthengisa abathengi ukuxhasa ukukhuthaza ipaseji nganye yokuhamba (kunye namava angaphezu kwe-100 afunyenwe ngaphakathi) egameni leTAT. Iindlela zichongiwe ngolu hlobo lulandelayo:
• Umjelo woNxweme oluseMazantsi
• Indlela yokuFumanisa iMekong
• Umjelo weMpuma-Ntshona
• Indlela u-8
• Umzila weKharavani yeeTi eMekong
• Umzila weLifa leMveli loMntla
• Ukuhamba ngenqanawa komlambo iMekong kwiGolden Triangle
• Indlela ePhakathi yeNkosi uBuddha
• IiProjekthi zaseRoyal
Ngoku uhlala kwi-www.mekongmoments.com, nganye yeepaseji inewebhusayithi ezinikeleyo, ebonelela iindwendwe ngombono onzulu wohambo ngokubanzi kunye namava alo adibeneyo-uninzi lwazo eThailand. Ukunceda ukufaka isandla kwiphulo lokhenketho elikhulu kuwo onke amazwe kwi-GMS, i-TAT isebenze neMTCO ukubandakanya amava eepaseji kwilizwe ngalinye elingummelwane kulo mmandla (Laos, Myanmar, Cambodia, Vietnam, ne China). Indlela efikelela kude ebizwa ngokuba yi 'Mekong Tea Caravan Trail', umzekelo, inamava omxholo eThailand, eLaos, eMyanmar nase China.
“Ukusebenzisana [ne-MTCO] kunye ne-Destination Mekong ukuvumela abahambi basekhaya nakwamanye amazwe ukuba babelane ngamava abo xa behamba kwiindlela ezinamazwe amaninzi ezivela eThailand, kunye nokundwendwela iiProjekthi zeRoyal Thai kungekuphela nje kulungelelaniswe nemizamo yeTAT yokukhuthaza iindawo eziziisekondari. , kodwa iMekong Moments ikwavumela amashishini amancinci kule mimandla ukuba akhe izakhono kwaye aqhube ishishini, utshilo uMnu Kitsana Kaewtumrong, uMlawuli oLawulayo weTAT weSebe lezoPapasho noBudlelwane noLuntu.
Xa betyelele iphepha lekhorido, iindwendwe zamkelwa ngetela lezithuba zemidiya yoluntu ezihlanganisiweyo ezinendawo kunye namava afanelekileyo kwipaseji. Isiqwenga ngasinye somxholo wemithombo yeendaba (ofanele ii-hashtag ezifanelekileyo) unxibelelwano kumaphepha amava axhunyiwe kwiMekong Moments, inika ulwazi malunga namava kunye nekhonkco kwizitishi zokubhukisha.
Izithuba zemithombo yeendaba kwezentlalo zinokuhluzwa ngeendlela ezisibhozo 'zabahambi' - ZOKUSEBENZA, INKCUBEKO, INDLELA YOKUPHILA, UKUTYA, INDALO, UHLAHLO LWABIWO-MALI, UKUZONWABISA, kunye NOSAPHO. Ngokucofa enye yezi zihluzo, iindwendwe zinokufumana amava afanelekileyo kuhambo lwazo. Ngapha koko, iqonga leMekong Moments likwavumela iindwendwe ukuba zikhangele ngokuthe ngqo ngemephu yokusebenzisana ephawulwe ngeepoyinti ezinokucofa.
Njengomphumo wokuphehlelela eli phulo, phantse amava angama-130 ngaphezulu komntu wonke sele edityanisiwe kwiqonga lamava ayi-10,000 XNUMX lamava eMekong Moments ukuza kuthi ga ngoku. Amava anje nge 'King Taskin Shrine' (kumazantsi oNxweme aManxweme), 'iAngkhang Nature Resort' (IiRoyal Projects), kunye neSukhothai Historical Park (Indlela Ephakathi yeNkosi Buddha) ziyajongwa, zinika iinkcukacha ezithe kratya malunga namava ukongeza nakweyiphi na ezinxulumene nomxholo kwimidiya yoluntu. Onke amava abhalwe ngenye yeendidi ezintlanu zamava okucoca ulwelo- YENZA, HAMBA, HLALA, SHOP, kunye TASTE.
"Siyavuya ukusebenzisana noGunyaziwe wezoKhenketho waseThailand [TAT] ukubonisa iindlela zamazwe amaninzi kuMmandla waseMekong, ovela eThailand," utshilo umlawuli olawulayo we-MTCO uJens Thraenhart.
"Ngokujonga kwangaphambili kweTAT ekusasazeni kweendwendwe ukusabela kukhenketho ngokubonisa indawo yesibini, sonwabile ukuxhasa iqhinga lethu ngeqonga lethu lokukhuthaza abahambi ngeMekong Moments ukuqhuba ishishini kubaqhubi abancinci bezokuhamba abanikwa amandla yitekhnoloji yorhwebo lwentlalo ENWOKE."